Man onaLedge (2012) – Burmese Subtitle
2012 Action, Adventure, Crime
ခေါင်မိုးစွန်းပေါ်ကလူတစ်ယောက် သောင်းပြောင်းထွေလီလှတဲ့ လူ့လောကမှာလူပေါင်းများစွာကို ထောင်နှုတ်ခမ်းနားမဟုတ်တဲ့ တိုက်ခေါင်မိုးနှုတ်ခမ်းနားရောက်စေတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိပါတယ်…. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဇာတ်လိုက်ကျော် Avatar မင်းသား Sam Worthington တစ်ဖြစ်လဲ နစ်ကတ်စီဒီဆိုတဲ့လူဟာ ရုစဗဲ့ဟိုတယ်ရဲ့ ၂၁လွှာကနေခုန်ချဖို့လုပ်ပါတယ် ……သူ့ကြည့်ရတာ ဒီလိုခုန်ချဖို့အစီအစဉ်ကို သေသေချာဆွဲထားသလားထင်ရပါတယ်…
ခုန်ချဖို့ ခေါင်မိုးစွန်ကိုမသွားခင် လက်ဗွေရာမကျန်အောင် နှုတ်ဆက်စာဆန်ဆန်ရေးခဲ့သလို ဝိုင်ပုလင်းတွေမနက်စာစားတုန်းက ကျန်ခဲ့တဲ့လက်ဗွေရာတွေကိုပါ ရှင်းခဲ့ပါသေးတယ်…ဒီလိုခုန်ချဖို့ စီစဉ်နေတုန်းမှာ နစ်ကတ်စီဒီ ရဲ့နောက်ကြောင်းကို တစ်ချက်ပြတယ်…သူကအရင်ကရဲဖြစ်ဖူးခဲ့ပြီး ပြဿနာတစ်ခုကြောင့် ထောင်(၂၅)နှစ်ကျသွားတယ်…ခုတော့ လူစည်ကားလွန်းတဲ့မြို့လယ်ခေါင်ရဲ့ ဟိုတယ်တစ်ခုပေါ်မှာ ခုန်ချဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်…
ခုန်ချဖို့ကြိုးစားတာက တခြားကြီးမားတဲ့အစီအစဉ်ကြီးအတွက် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုများဖြစ်လေမလား….
ဇာတ်ကိုပုံဖော်သွားတာ…ကိုယ်တိုင်လိုက်လံအဖြေထုတ်ရင်းဇာတ်လမ်းက တဖြည်းဖြည်းရုပ်လုံးပေါ်လာသလို အစကနေအဆုံးထိ ကြည့်ရင်း ကိုယ်ပါ ဇောချွေးပြန်လာတဲ့ဇာတ်ကားမို့ ကျန်တဲ့ဟာတွေမပြောတော့ပါဘူး…နည်းနည်း Spoiler လုပ်တာနဲ့ ရသပျက်သွားနိုင်တဲ့ကားမို့ပါ….”
Afton Williamson Ann Arvia Anthony Mackie Arthur J. Nascarella Barbara Marineau Bill Walters Brett G. Smith Brian James Pepe Cal Koury Candice McKoy Daniel Sauli Derrick T. Lewis Don Castro Ed Harris Edward Burns Elizabeth Banks Erin Quill Felix Solis Frank Anello Frank Pando Génesis Rodríguez Geoffrey Cantor Gerry Vichi J. Bernard Calloway J. Smith-Cameron Jabari Gray James Andrew O'Connor James Thomas Bligh James Yaegashi Jamie Bell Jason Furlani Jason Kolotouros Jeff Grossman Jeremy McLain Jimmy Palumbo Joe Lisi John Comer John Dossett Johnny Solo Jonathan Walker Justin Chauncey Kyra Sedgwick Liz Holtan Mandy Gonzalez Mario Moise Fontaine Marmee Regine Cosico Michael Laurence Patrick Collins Pooja Kumar Rick Pantera Robert Clohessy Sam Worthington Sylvia Kauders Terry Serpico Titus Welliver William Sadler
Option2mega.nz 1.58 GB 1080p
Option3onedrive.live.com 1.58 GB 1080p
Option4mediafire.com 1.58 GB 1080p
Option7mirrorace.com 1.58 GB 1080p